Myanmar: RFA discussion on 2015 election Uploaded by Myo.Htike.Tan.Thein at Your Listen
Myanmar: RFA discussion on 2015 election
This music and or audio is not accessible due to copyright violations ."RFA မြန်မာဌာန | တန ..." has been removed due toacopyright notification. Keep exploring! You can find more similar and music and audio here - Myanmar: RFA discussion on 2015 election
Myo.Htike.Tan.Thein3uploads 1 followers0likes 23 activities
Tags: myanmarburmaburma democratic concernburma democratic concern (bdc)national league for democracynational league for democracy (nld)aung san suu kyidaw aung san suu kyimyo theinyan naing htunmyo htike tan theinnld-la-korea
RFA မြန်မာဌာန | တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်း 2015-07-05
ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အာဏာပိုင်တွေ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အကြောင်း ဆွေးနွေးချက်
အခုတစ်ပတ် ဆွေးနွေးပွဲ စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာ လာမယ့် ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်
မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်နေကြတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ Burma Democratic Concern (BDC) အဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ
ဦး မျိုးထိုက်တန်သိန်း ၊
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်-လွတ်မြောက်နယ်မြေ NLD-LA တောင်ကိုရိယားဌာနခွဲ
ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးရန်နိုင်ထွန်းတို့ ပါဝင်ဆွေးနွေးထားကြပါတယ်။
Myanmar: Rfa Discussion On Voters … by Myo.Htike.Tan. ... 00:21:24 555
Myanmar: Rfa Discussion On Elector… by Myo.Htike.Tan. ... 00:23:42 648
Election by Gordon.Dillama ... 00:00:04 110
The Week Ahead: Milestone In Myanm… by business 00:12:45 45772
Molana Swaleh Bodi(myanmar Bayaan-… by rangooni 00:49:10 2295